Website Archives | Page2of2| Myanmar Web Store
Do not let customers go away by not havingawebsite!
Do not let customers go away by not havingawebsite! —————————————————— It’s an internet world and...
Website နှင့် Web Application ဘာကွာခြားလဲ?
Website နှင့် Web Application ဘာကွာခြားလဲ? ****************************************** Website ကို ပြုလုပ်ထားသော Admin က မိမိ၏ Website Information အချက်အလက်များကို ပြုပြင် မလုပ်သေးသ၍သုံးစွဲသူများ...
CMS (Content Management System) ဆိုတာဘာလဲ? *************************************************** CMS (content Management System) ဆိုတာ ကျွမ်းကျင်ကွန်ပျူတာပညာရှင်များသာမက သာမန်သုံးစွဲသူမျးကိုယ်တိုင် မိမိတို့၏ website ကို ပြင်ဆင်ခြင်း.၊...
Website ဆိုတာဘာလဲ? What is website? ********************** Internet ကိုအသုံးပြု၍ web address ကို browser တွင် ရိုက်ထည့်ပြီး ကျလာသော စာမျက်နှာသည် web...
Website တစ်ခုပြုလုပ်တော့မည်ဆိုလျှင်… ************************************* Website တစ်ခုပြုလုပ်တော့မည်ဆိုလျှင် မည်သည့် အခြေခံအကြောင်းအရာများ ထည့်သွင်းရေးသားသင့်လဲ။ Home Page : home page သည် မိတ်ဆွေတို့ Website ကို...
Benefit of havingawebsite?
မိတ်ဆွေတို့ business လုပ်ငန်းများတွင် Website ထားရှိခြင်းအားဖြင့် မိတ်ဆွေတို့ လုပ်ငန်းအား ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် customer များထံ ထိရောက်သော ကြော်ငြာမှုပေးနိုင်ခြင်း Customer များ ဝေဖန်အကြံပေးမှုများကို တိုက်ရိုက်မှန်ကန်လျင်မြန်စွာသိရှိနိုင်ခြင်း မိတ်ဆွေတို့...
Web Hosting + Domain Name + Web Design Pages = Website Web hosting ဆိုတာဘာလဲ? မိတ်ဆွေတို့၏ website files...